Nayakhabar.com: को हुन साउदी अरबमा नेपाली राजदूत शर्मालाई छुरा हान्ने ?
को हुन साउदी अरबमा नेपाली राजदूत शर्मालाई छुरा हान्ने ?
साउदी अरबका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत आनन्दप्रसाद शर्मामाथि दूताबासमै छुरा प्रहार भयो । छुरा प्रहारबाट काँध र औँलामा गम्भीर चोट लागी अस्पताल भर्ना भएका साउदी अरबका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत आनन्दप्रसाद शर्मालाई डिस्चार्ज गरिएको छ । राउतका अनुसार शर्माको काँध र मुखमा टाँका लगाइएको छ ।
शर्मालाई बिहीबार बिहान करिब ११ बजे दूतावासकै आश्रयमा बस्दै आएका सुनसरीका लक्ष्मणबहादुर राईले उनको कार्यकक्षमै गएर छुरा प्रहार गरेका थिए । शर्माको कार्यकक्षको ढोकाको चुकुल लगाएर सोफाले थुनेर आक्रमण गरिएको थियो । राई कार्यकक्षमा प्रवेश गरेर एक्कासि आक्रमण गर्न थालेपछि शर्मा चिच्याएका थिए । शर्मा चिच्याएको सुनेपछि दूतावासका कर्मचारीको सहयोगमा साउदी प्रहरीले ढोका तोडेर तुरुन्तै उनलाई उद्धार गरेको थियो ।
‘तुरुन्तै उद्धार हुन नसकेको भए ठूलै घटना हुनसक्थ्यो’, राउतले टेलिफोनमा भने । छुरा प्रहारबाट घाइते भएका शर्मालाई तत्कालै उपचारका लागि रियादस्थित किङ फैसल अस्पतालमा पुर्याइएको थियो । शर्मालाई आक्रमण गर्ने राई भने एक महिनाअघि देखि स्वदेश फिर्तीका लागि दूतावासकै आश्रयमा बस्दै आएका थिए । दूतावासका अनुसार मानसिक रोगी रहेका राईलाई केही दिन भित्रैमा स्वदेश पठाउने तयारी भइरहेको थियो ।
यसअघि राईलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश पठाउनका लागि दुई पटक एअरपोर्ट लगिए पनि विभिन्न बहाना बनाएर स्वदेश फर्कन मानेका थिएनन् ।
राईले आफू कार्यरत कम्पनीकै भारतीय कामदारलाई समेत चक्कु प्रहार गरी भागेर दूतावासको शरणमा आएको राउतले बताए । छुरा प्रहार गर्ने राईलाई साउदी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
गोविन्द गौतमले पाए ११ तोपको सलामी, तर छैन किरियाखर्च
कञ्चनपुर, पुनर्बासका गोविन्द गौतम भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मारिए । उनको हत्या भारतीय सुरक्षा निकायबाटै भएको हो । यो शोकबाट कञ्चनप...
चीन भ्रमण सकेर महरा स्वदेश फर्किए, भारत भ्रमणमा रहेका गृह मन्त्री निधिले नरेन्द्रमोदीलाई भेटी प्रचण्डको सन्देश बुझाए
काठमाडौं । पाँचदिने चीन भ्रमण सकेर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको...
कञ्चनपुरमा एसएसबीको आतंकः बन्दुक देखाएर घर छाड्न धम्की
२६ फागुन, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरस्थित आनन्दबजारमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसवी)ले घरघरमा पसेर धम्याउन थालेको छ । सीमा क्षेत्रमा कल्भर्ट निर...
भक्ती थापा सम्झाउने योद्धा, ११ तोप सलामी पाउने झुपडीको युवा
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को गोलीबाट गत मृत्यु भएका पुनर्बासका गोविन्द गौतमको आज राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिने भएको छ । उ...